Ochioma, Rola Montero "onye di egwu" | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Jisie ike bụ akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ nke onye edemede a ma ama na Spen Rosa Montero dere. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebipụta ya bipụtara ya Alfaguara, na August 27, 2020. Onye edemede ahụ gosipụtara n’ajụjụ ọnụ a gbara maka magazin ahụ Zenda na akụkọ ahụ gbasara: “… egwu ibi ndụ, yana otu esi mụta ị tufu egwu ahụ iji bie ndụ kawanye njọ”.
Akụkọ a na-egosi etu ndụ ndị protagonists, Pablo na Raluca si bie n'otu obere obodo dị na ndịda Spain. Ha abụọ agafeela ọnọdụ dị mgbagwoju anya na eziokwu ha dị iche kpamkpam, mana n'ụzọ ụfọdụ ha ga-emeju ibe ha, ebe ha bụ ọchịchịrị na ìhè. Jiri akwụkwọ a, onye edemede ahụ na-atụgharị uche na ndụ, obi ụtọ na nsonaazụ nke oge gara aga na-afụ ụfụ.
1 Nchịkọta Nke Ọma (2020)
2 Nyocha nke oma
2.2 Di na nwunye
2.3 Ihe odide ndị ọzọ
4 Ndụ biographical nke onye edemede
4.1 Ọzụzụ ọkachamara
4.2 Ọrụ ndi oru nta akuko
4.3 Egwuregwu edemede
4.3.1 Akwụkwọ nke Rosa Montero dere
Na nchikota nke Jisie ike (2020)
Pablo Hernando bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ onye ọ na-aga ụgbọ okporo ígwè ka ogbako na ndịda Spain. N'ịbụ onye dị omimi, ọ na-emeghachi omume hụ akara "Maka ire ere" n'ebe dị anya, gosipụtara na windo nke ụlọ ochie nke chere egwu ahụ. Na mberede, kpebie ịgbada n'ebumnuche nke zụta kwuru ewepụghị. N'oge ahụ, a maghị ihe kpatara mkpebi ahụ a na-atụghị anya ya ma na-agbagha agbagha.
Apartmentlọ a dị na Pozonegro, obodo a chụpụrụ achụpụ nke ihe karịrị otu puku mmadụ bi na ya. Na mbụ, obodo a nwere ọganiihu n'ihi ụlọ ọrụ ebe a na-egwupụta akụ, n'agbanyeghị na ọ nweghị nke fọdụ n'oge ọma ndị ahụ. Ọ bụ ezie na mpaghara ahụ adabaghị ụdị ndụ Pablo maara, ebe ahụ ọ kpebiri ịgbaba, na-emikpu onwe ya n'oké ịda mba.
Nke nta nke nta, protagonist ga-ezute ihe odide na-adọrọ mmasị na gburugburu ya. Na mbido ndị ụlọ nke ụlọ a na-eleghara anya, otu n'ime agbata obi ya, bụ Raluca. Nwanyị a na-enyo enyo ga-eweta mgbanwe dị egwu na ndụ nwoke ahụ, bụ onye ga-amalite inwe ekele maka akụkụ ndị ahụ na-emetụtaghị ya na mbụ. Enye eyedi unwana eke ami okoyomde ke ndaha nsungikom oro.
Nyocha nke Jisie ike
Jisie ike bụ akwụkwọ ọgụgụ onye edemede ahụ kọwara dị ka: “… a dị adị thriller na-enweghị igbu ojuju nke enigmas na ihe omimi ”. E debere ya na obodo akụkọ ifo a na-akpọ Pozonegro, na atụmatụ ya kọwara site a onye obula maara, na ntakịrị ihe karịrị peeji 300. A haziri akwụkwọ a na obere isi, nke akụkọ na-aga n'ụzọ dị mfe ma doo anya.
Ọ bụ a afọ 54-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, nwetụrụ nsogbu, onye ejiri mara ya na iwu nzuzoN'ihi ọnọdụ a pụrụ iche, ndị enyi ya dị ole na ole. Pablo eruola ogo ebe na-ajụ ihe ndị i kwenyere n’oge gara aga, omume gị na mkpebi gị; nke nwere ike kpaliri ya iwere mgbanwe dị otú ahụ dị adị na ịdị adị ya.
Ọ bụ ihe onye omenkà nke Pozonegro, ọkachamara na eserese eserese nke ịnyịnya; ọ bụ nwanyị nweru ume; ya na ihu ohu ohuru juputara na mmadu. N’agbanyeghi na o bi ndu di nwayo, ihe omimi nke ndu ojoo ya kpuchiri ya, nke ozozo nke oma; ikekwe n'ihi na ọtụtụ ndị nọ n'obodo ahụ nọ n'ọnọdụ yiri nke ahụ.
Ọtụtụ mkpụrụedemede nke abụọ na-emekọ ihe na nkata ahụ, nke, dị ka ndị protagonists, wuru nke ọma. N'etiti ndia Ọtụtụ ndị ọrụ Pablo pụtara iche, dị ka Regina, Lourdes na Lola, ha bụ ndị mbụ na-echegbu onwe ha mgbe ọ nwụsịrị. Na mgbakwunye, ndị ibe ya German na Matías, bụ ndị gwara ndị uwe ojii mgbe ọ na-anọghị na ọgbakọ na Malaga.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ otú ahụ onye agbata obi ohuru ohuru, emi odụn̄de ke obio oro etiede nte etre ke ini oro mbubịk ido ọyọhọde. Ndị a ha zoo ọtụtụ enigmas, ụfọdụ na-abaghị uru na ikekwe na-atọ ọchị, mana ndị ọzọ dị njọ nke ukwuu. Ihe niile gbara nsogbu dị mgbagwoju anya, nke na-adịghị iche na eziokwu dị ugbu a.
Onye dere akwukwo meputara akuko nke akparita uka banyere ya dika omume oma na ajo omume nke ndi madu. Ihe bụ ihe ọzọ, na-akpọ òkù ka e chee echiche siri ike na akara ndị nwere ike ibute traumas nwata na ọdachi ga-esi na ya pụta.
Ihe a niile site na echiche dị mma, na-akụ nzọ mgbe niile maka ihe ịga nke ọma nke ihe ọma karịa ihe ọjọọ. Gbanwee echiche gị, ma jiri anya dị iche hụ ndụ, tụgharịa peeji ahụ ma tụkwasị obi n'ọdịmma.
Jisie ike o jisiri ike dọta ọtụtụ puku ndị na-agụ akwụkwọ; na weebụ, 88% nke ndị a na-enyocha akwụkwọ akụkọ ahụ nke ọma. Ihe nyocha ya karịrị 2.400 dị n'elu ikpo okwu pụtara ìhè Amazon, na nkezi nke 4,1 / 5. 45% nke ndị ọrụ a nyere akwụkwọ ahụ kpakpando ise ma hapụ mmetụta ha mgbe ha gụsịrị. Naanị 13% gosiri ọrụ 3 kpakpando ma ọ bụ obere.
Onye edemede anatawo otutu otuto site na ntinye ohuru a, ma n’uwa ma n’uwa. Agbanyeghi na oge a, o tufuru udiri udiri agwa ya, ihe omimi ya na-akpali akpali ma na-agbanwe agbanwe, tinyere agwa ya na isiokwu ya, bụ nke masịrị ndị na-egwu ya.
Ndụ biographical nke onye edemede
Onye nta akụkọ na onye edemede Rose Montero Ọ bụ onye obodo Madrid, amụrụ ya na Wednesde Jenụwarị 3, 1951, nne na nna ya bụ Amalia Gayo na Pascual Montero. N'agbanyeghị ibi ndụ nwata na ọnọdụ dị umeala n'obi, guzopụtara ekele maka ọgụgụ isi ya na echiche ya. Kemgbe ọ bụ nwata ọ hụrụ akwụkwọ ọgụgụ n'anya, ihe akaebe nke a bụ na na naanị afọ 5 o dere ya mbụ mbụk edoghi.
Na 1969, Ọ banyere Mahadum Complutense nke Madrid ịmụ amụ banyere akparamaagwa. Otu afọ mgbe e mesịrị, ọ malitere ịrụ ọrụ n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ Spanish, gụnyere: Ụba y Pueblo. Ahụmịhe ọrụ a mere ka ọ kwụsị ịchụso ọrụ ya dị ka ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ya mere ọ gbanwere ubi ya na afọ anọ ka e mesịrị gụsịrị akwụkwọ dị ka odeakụkọ na Madrid School of Journalism.
Ọrụ ndi oru nta akuko
Ọ malitere dị ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ Spen El País, obere oge ka ntọala ya gasịrị, na 1976. N'ebe ahụ, ọ rụrụ ọtụtụ isiokwu, nke nyere ya ohere jigide afọ abụọ (1980 na 1981) ọkwa onye isi-ọkaibe nke mgbakwunye Sunday nke akwụkwọ akụkọ.
N’oge niile ọ dị ndụ nwere ọkachamara na ajụjụ ọnụ, mpaghara nke o putara maka izizi ya na uzo ya. Ọ bụ otuto ya ihe karịrị mkparịta ụka 2.000 na ọnụ ọgụgụ ndị a ma ama, dika: Julio Cortázar, Indira Gandhi, Richard Nixon, tinyere ndi ozo. E nwere ọtụtụ mahadum Spanish na Latin ndị werela usoro ya iji gbaa ajụjụ ọnụ dị ka ihe nlereanya.
Onye edemede debuted na akwụkwọ akụkọ Ihe omuma nke obi mgbawa (1979). Ọrụ a juru ọha na eze na nkatọ edemede banyere oge ahụ, n'ihi isiokwu ya banyere ụmụ nwanyị nwere ikike. Ugbu a nwere ekele maka akụkọ 17, akwụkwọ ụmụaka 4 na akụkọ 2. Ọ pụtara ìhè n'etiti akụkụ Akwụkwọ Nsọ ya: Nwa anụ riri anụ (1997), nke o ji nweta ihe nrite Primavera maka akwụkwọ akụkọ Spanish.
Akwụkwọ nke Rosa Montero dere
Akwụkwọ akụkọ nke obi mgbawa (1979)
Ọrụ Delta (1981)
Aga m emeso gị dị ka eze nwanyị (1983)
Ezigbo nna m ukwu (1988)
Mara mma ma gbaa ọchịchịrị (1993)
Nwa anụ riri anụ (1997)
Obi Tartar (2001)
Nwanyi ara ulo (2003)
Akụkọ banyere Eze Transparent (2005)
Ntuziaka iji chekwaa ụwa (2008)
Anya mmiri na mmiri ozuzo (2011)
Echiche nzuzu agaghị ahụ gị ọzọ (2013)
Arọ nke obi (2015)
Anụ ahụ (2016)
N'oge asị (2018)
Jisie ike (2020)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Rosa Montero nke oma
Vicente Nuñez. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke